पोखरामा फेरी जमिन भा’स्सीयो, ख’नेर हेर्दा देखीयो यस्तो ! के हुन लाग्यो यस्तो ? हेर्नुहोस भिडियो | समाचार
September 18, 2021 NepstokLeaveaComment on पोखरामा फेरी जमिन भा’स्सीयो, ख’नेर हेर्दा देखीयो यस्तो ! के हुन लाग्यो यस्तो ? हेर्नुहोस भिडियो
झापामा यी प्रहरी नुहाउन गएका थिए, तर फर्कियो उनको शव! यस्तो रहेछ कारण
सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
पाल्पामा पहिरोले देवबहादुरको दुई तले पक्की घर पुरियो